October 20, 2020 Farah Abdikadir Mohamed 4
Mas’uuliyiinta Puntland ee gobolka Sool gaar ahaan degmada Boocame ee gobolka Sool ayaa ka hadlay dhaqdhaqaaqyada ay ciidamada maamulka Somaliland maalmihii ugu dambeeyey ka wadeen degmadaasi iyo deegaamada hoosyimada.
Guddoomiyaha degmada Boocame ee Puntland Xayle Xasan Shire, oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in degmadu ay nabdoontahay ayna kujirto gacanta ciidanka ammaanka Puntland iyo maamulkiisa.
Guddoomiyaha oo ka hadlayey ciidamo ay soo bandhigtay Somaliland ayaa sheegay inuu jiro nin ka soo jeeda degmada oo gaari dagaal iyo dhowr askari oo u saarnaa ula galay maamulka Somaliland sida uu hadalka u dhigay.
Waxa uu sheegay in mulkiilaha gaarigaasi dagaal uu awal ka mushahar qaadan jirey Puntland isla markaana uu si shaqsiyan ah u go’aansaday inuu ugu galo maamulka Somaliland, haseyeeshee aysan jirin ciidan iyo gaadiid ay leedahay Puntland oo u goostay maamulka Hargaysa.
Warani maalmo hore ayuu ahaa inaga yara Baandheeya.
Waar ciidanka halasoo dhaweeyo hana la qarameeyo Ciidanka Qaranka Somaliland halagu kala daro hana lakala shaandheeyo tababar hor lehna hala mariyo si loo ogaado Akhlaaqda iyo tayada ciidanimo.
Kusoo dhawaada Dalkiinii Aad kayara Maqnaydeen, hawshu hasocoto Geediga Wadaay ilaa Guulo ICTIRAAF Laga Gaadho.
Guul iyo Gobonimo Geediga wadaay Geediga Wadaay.
Waa sax anagana gaadiidka Budhlayn oo Sanaag jooga baanu la goosaneynaa kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Waar Budhlayn waa budh budhaye meesha ka soo yaaca Waros & Dhulos kkkkkkkkkkk. Dhabayaco maaha wax la sheegto anaa ku daaley kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.
Madaxweynihii qaranka baa ka jawaabi waayay.
hayle hassan shire ninkaa ayaa hadel cadeyay mesha somaliland waxba uma yalaan yesan kusoo hungoobin mel aan lagaa jacleyn mesha ma aha laascaano dadka lugu tunto